နှစ်တွေ အကြာ ကြီး ထိ သံကြိုး ခတ် ထား ခံ ရ တဲ့ သူမ – Shwe Ba
Homepage / Knowledge / နှစ်တွေ အကြာ ကြီး ထိ သံကြိုး ခတ် ထား ခံ ရ တဲ့ သူမ
နှစ်တွေ အကြာ ကြီး ထိ သံကြိုး ခတ် ထား ခံ ရ တဲ့ သူမ
နှစ်အကြာကြီးထိ သံကြိုးခတ်လို့ ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ ရတဲ့ သူမတို့အကြောင်းေ လး ပုံ့ပြောပြမယ်….
လူရယ် လို့ဖြစ်လာပြီမို့ လောကဒဏ်ရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကို ခံရတာ သိပ်တော့ မဆန်းလှပါဘူး…ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ့ လောကဒဏ် ဆိုတာကြီးက သူတို့ သား အမိကိုမှ ခဏခဏ လွှဲ လွှဲ ရိုက်နေတာကတော့ အရမ်းကို ရင်နာစရာ ကောင်းလှပါတယ်…..
သူတို့သား အမိ ပုံ့ဆီရောက်လာပုံလေးက ထူးဆန်းတယ်…ပုံ့ ဖွင့်ထားတာ ဘိုးဘွားရိပ်သာဆိုတော့ ပုံမှန်ဆို သားသမီးတွေက ပစ်သွားတဲ့ မိအိုဘအိုတွေဘဲ ရောက်လာတတ်ကြတယ်…
သူတို့ ကတော့ ထူးထူးခြားခြား မအေကိုယ်တိုင်က သူ့သမီးလေးကို ရိပ်သာအပ်ပါရစေဆိုပြီး ခွင့်လာတောင်းခဲ့တာ….
သူတို့ သားအမိ ပုံ့ဆီရောက်လာခဲ့တာ ခုဆောင်းတွင်းဆို တနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ…သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဟာ ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလို့ ရေးဖို့တောင် စကားလုံးတွေ ရှာမရခဲ့ဘူး…
ဒါပေမဲ့ လောကကို လွယ်လွယ်အရှုံးပေးတတ်ကြသူတွေကို တွေ့တိုင်း ဒီသားအမိအကြောင်းလေးကို ရေးပြချင်ခဲ့မိပါတယ်….
မနှစ်ကဆောင်းရာသီရဲ့ နှင်းတွေကျနေတဲ့ နေ့တနေ့မှာပေါ့…ပိန်ချုံးပြီး မျက်ကွင်းတွေတောင် ကျနေပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားတစ်ယောက် စက်ဘီးအစုတ်လေးကို စီးပြီး ပုံ့ဆီရောက်လာခဲ့တယ်….
ပုံ့အတွက်တော့ အဲ့ဒီနေ့သည်လဲ အရင်နေ့တွေလိုပါဘဲ…ကလေးတွေနဲ့ ဆော့ရင်း ရိပ်သာရှေ့က ခုံလေးမှာ ထိုင်နေခဲ့တယ်…အဲ့ဒီအချိန် အဖွားရောက်လာပြီး ပုံ့ကို မေးရှာတယ်…
” သမီး ခိုလှုံရာဆိုတာ ဒါလားဟင် ” ပုံ့လဲ ” ဟုတ်ပါတယ် အဖွား…ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ လာ ထိုင်ပါ ” ဆိုတော့…
အဖွားက ပုံ့ဘေးက ထိုင်ခုံလေးမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ ချုံးပွဲချငိုပါတော့တယ်…ပုံ့လဲ ရိပ်သာက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဆိုပြီး စိတ်ပူသွားတယ်…
အဖွားခမျာတော့ ဒီစကားလုံးတွေကို ပြောထွက်ဖို့အတွက် ရင်ထဲမှာ အရမ်းကိုတစ်ဆို့ နေပုံပေါ်ပါတယ်…ပုံ့မေးတာ မဖြေနိုင်သေးဘဲ သူငိုလို့ ဝတော့မှ…
” အဖွားသမီးလေးကို ဒီရိပ်သာမှာ ထားချင်လို့ပါ သမီးရယ် ” တဲ့…ပြောပြီးတာနဲ့ ချုံးပွဲချငိုပြန်ပါတယ်…သားသမီးကို ပစ်ရတဲ့ပွဲဆိုတော့လဲ မငိုဘဲ ဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲလေ…
ပုံ့လဲ “ဟင်” လို့ တလုံးတည်းသာ ပြောပြီး အတော်အံ့သြသွားမိတယ်…ဟုတ်တယ်လေ ပုံ့ ဖွင့်ထားတာ ဘိုးဘွားရိပ်သာဆိုတော့ ပုံ့ဆီရောက်လာတာတွေက များသောအားဖြင့် သားသမီးက ပစ်တဲ့ မိအိုဘအိုတွေ…
အခုကျ မိခင်ကိုယ်တိုင်က သူ့သမီးလေးကို လာအပ်ရှာတာဆိုတော့ မအံ့သြခံနိုင်ပါ့မလား…ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ…
” အဖွား…အဖွားသမီးလေးက ဘာဖြစ်လို့လဲ…ဘာလို့အပ်ချင်တာလဲ ” ဆိုတော့ အဖွားက…
” ကျွန်မ သမီးလေးက စိတ်ကျန်းမာ ရေး မကောင်းရှာတဲ့သူပါရှင်… အသက်က အခုဆို ၃၈ နှစ်ရှိပါပြီ…အသက် ၁၈ နှစ်လောက်ထဲက ဒီရောဂါဖြစ်ခဲ့တာပါ…”
” သူ့အဖေလဲ သူ့ရောဂါကို ကုရင်းနဲ့ဘဲ ဆုံးသွားတာ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ…သူ့အဖေမရှိထဲက ကျွန်မဘဲ ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ရတာပါ ”
” အခု သမီးလေးရောဂါက ပိုဆိုးလာလို့ ကျွန်မ သူနဲ့လဲ မနေရဲတော့လို့ပါ…ပြီးတော့ ကျွန်မလဲ အသက်ကြီးလာတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့လို့ သူ့ကိုလဲ ဝအောင် ရှာမကျွေးတော့သလို၊
ကျွန်မသေသွားရင်လဲ သမီးလေးကို တစ်ယောက်ထဲ စိတ်မချလို့ လာအပ်ရတာပါရှင်…ဟီး…ဟီး…ဟီး…” ဆိုပြီး ငိုပါတော့တယ်…ငိုနေရင်းနဲ့ဘဲ…
” ကျွန်မ သမီးလေးကို ကျွန်မမသေခင် စိတ်ချခဲ့ချင်လို့ပါ…ဟီး ဟီး…ကျွန်မလဲ ကျန်းမာရေး တနေ့တခြား ပိုပိုဆိုးလာလို့ပါ…အရင်ဆို ကျွန်မ လယ်ထဲက ကနဖော့တွေ ကန်စွန်းရွက်တွေ ခူးပြီး စက်ဘီးနဲ့ မြို့တက်ရောင်းတာ…အခုတော့ စက်ဘီးစီးရင် အရမ်းကိုမောလာတယ်…ကျွန်မ သေမှာ မကြောက်ပါဘူး…ကျွန်မသမီးလေးကို စိတ်မချလို့ပါ…ဟီးဟီး…လက်ခံပေးပါ ဆရာမရယ်….” ဆိုပြီး သူ့လက်ထဲပါလာတဲ့ သူ့သမီးလေးဓာတ်ပုံပြရှာတယ်….
ပုံ့လဲ သာမာန်ဆို အသက်ငယ်တဲ့သူ၊ အိမ်ယာရှိတဲ့သူ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး အရမ်းကို ဆိုးတဲ့သူဆို လက်မခံပါဘူး..ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ အဖွားကို သနားတာနဲ့ ပုံ့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပါ့မယ်ဆိုပြီး လိပ်စာတောင်းထားလိုက်တယ်…
အဖွားလဲ ထိုင်ရာကနေထ ပြန်ဖို့ဟန်ပြင်ရင်း စက်ဘီးပေါ်တက်တဲ့အထိ တဖွဖွ မှာရှာတယ်…
“…ဆရာမရယ် လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါနော်…ကျွန်မ အားကိုးပါရစေနော်…ဆရာမ လက်ခံရင်လေ ကျွန်မ အိမ်ဝိုင်းလေးကို ရောင်းပြီ အကြွေးလေးတွေပေးပြီးတာနဲ့ ကျွန်မလဲ ကျွန်မသမီးလေးနဲ့ လာနေပါရစေနော်…ဆရာမ လာဖြစ်အောင် လာခဲ့ပါနော်….”
ပုံ့လဲ ” ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ စိတ်ချပါအဖွားရယ်…ပုံ့လာခဲ့မယ်နော်..” လို့ ပြောပြီး နောက်နေ့မှ သွားမယ်ဆိုပြီး နေလိုက်တယ် စိတ်ထဲတော့ အတွေးများစွာနဲ့ပေါ့….
ပုံ့ တမနက်လုံး သူတို့သားအမိအကြောင်းဘဲ တွေးနေမိတယ်…သူ့သမီးလေးက ဘာလို့ ရူးတာလဲ…မိသားစု ဆွေမျိုး မရှိဘူးလား…အဖွားက ဘာလို့ သေစကား ခဏခဏပြောရတာလဲ…သူ့သမီးလေး မရှိရင်ရော သူဘာဖြစ်မှာလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့….
နေ့လည်လောက်ရောက်တော့ ပုံ့စိတ်ထဲ လုံးဝကိုနေလို့ မရတော့ပါဘူး…ပုံ့ ရိပ်သာက အကိုကို ကားမောင်းခိုင်းပြီး အဖွားတို့သားအမိရှိတဲ့ ရွာလေးကို ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်…
ရွာလေးက ဟင်္သာတနဲ့ သိပ်မဝေးပေမဲ့ တော်တော်လေးကို ချောင်ကျပါတယ်…ကားပေါ်က တစ်ယောက်ကဆင်းပြီး ရှေ့ကလမ်းရှာပေးရပါတယ်…ကားက နွားလှည်းလမ်းကြီးပေါ် ခွမောင်းရတာ မိုးကုန်ကာစ ရွံ့လမ်းဆိုတော့ တကယ့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲပါ…
မေးရင်း မေးရင်း မောင်းလာလိုက်တာ…နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ရေအိုးစင်လေးနဲ့အိမ်ဟာ မဌေးတို့ သားအမိအိမ်ပါတဲ့…အော် သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ ပူလောင်နေပေမယ့် သူတပါးကိုတော့ အေးချမ်းစေချင်တဲ့ စေတနာလေးရှိကြပါလားပေါ့…
ခြံရှေ့ကိုရောက်တော့ အိမ်ဆိုတာ ရှာမတွေ့ဘူးရယ် တခြံလုံး ခြုံတွေနဲ့ဖုံးလို့…ပြီးတော့ တောရွာက အိမ်ဆိုတော့ ခြံဝနဲ့ အိမ်က အတော်လေးလှမ်းတာ…အိမ်ဆီကိုရောက်ဖို့ အပင်တွေကြားက တိုးဝှေ့သွားရတာရယ်…
ဟော…တွေ့ပါပြီ…ကြမ်းပေါက်ကျဲကျဲ အမိုးပြဲပြဲ ထရံအကွဲနဲ့ ယိုင်နွဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ တချိန်တုံးက ခန့်ခန့်ထည်ထည် ရှိခဲ့ပုံပေါ်တဲ့ အိမ်ကြီး…
ပုံ့တို့ အိမ်နားကို ရောက်တော့ အဖွားဒေါ်ဌေးနဲ့ အနားက ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေလဲ ဝိုင်းလာကြတယ်…လာပါပေါ့…ကျွန်မတို့ အိမ်ပါတဲ့…ဆရာမကို ခေါ်ရမှာ အားတော့ နာပါတယ်တဲ့…ကိစ္စမရှိပါဘူး…
သူမဖိတ်ခေါ်ခင်ထဲက ပုံ့က အိမ်ပေါ်ခွတက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်နေပါပြီ….ဒါပေမဲ့ ပုံ့အိမ်ပေါ်ရောက်ရောက်ချင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ပုံ့ကို ပုံလျက်သားကျသွားစေခဲ့ပါတယ်…ဟုတ်တယ်…ပုံ့ သူမကို မြင်မြင်ချင်း ဘာမှ မပြောနိုင်ဘဲ ငေးရင်း ထိုင်ချလိုက်ရတယ်….
သူမ…သူမ ဆိုတာက အသားဖြူဖြူ၊ နှာတံသွယ်သွယ်၊ ရုပ်ချောချောလေးနဲ့ အဖွားဒေါ်ဌေးရဲ့ သမီးလေး… ခြေထောက်ကိုတော့ အိမ်လည်တိုင်မှာ သံ​ကြိုးကြိုးကြီးနဲ့ တွဲပြီး သော့ခတ်ထားလေရဲ့…
ခြေထောက်လေးတွေကြည့်လိုက်တော့လဲ ဖြူနုလို့…ဒါပေမဲ့ ခြေကျင်းဝတ်မှာ သံကြိုးပွန်းရာကြီးနဲ့…သူကို သော့ခတ်ထားတဲ့နေရာမှာလဲ ကြမ်းပေါက်တွေက ကြဲလို့…
သံကြိုးခတ်ထားသူဟာ အမေဖြစ်နေတာမို့…ဘာလို့ သော့ခတ်ထားလဲလို့ အရင်မမေးဖြစ်တော့ဘူး…ဘယ်မိဘမှ သံကြိုးတန်းလန်းနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးကို မမြင်ချင်တာ အသေအချာမို့ပါ…
ဒါကြောင့် ဒီလို သံကြိုးချည်ထားတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ လို့ မေးမိတယ်….
” သူမ အသက် ၂၀ ကျော် ၊ သူမ အဖေ ဆုံးပြီးထဲက သမီးလေးကို ကျွန်မက ဒီလိုဘဲ သော့ခတ်ထားရတယ်…ခုဆို သမီး အသက် ၃၈ ဆိုတော့၊ သံကြိုးခတ်ထားရတာ နှစ်တော်တော်ကြာပါပြီ ”
“သမီးလေး အဖေမရှိတော့ သားအမိနှစ်ယောက်ထဲ၊ ကျွန်မက ကနဖော့ချိုးသွားတော့ အိမ်မှာ သမီးကို စောင့်မယ့်လူမရှိတာနဲ့ ထွက်သွားမှာစိုးလို့ သံကြိုးချည် ထားခဲ့ရတာပါ”
“ဘေးက ကြမ်းပေါက်တွေက ကျွန်မဖောက်ပေးထားတာ၊ အပေါ့အလေး သွားလို့ရအောင်ပါ”
ကျွန်မ ဘာမပြောနိုင်ဘဲ ငိုင်နေမိတယ်…အော်…အဖွားရယ်…ထွက်သွားမှာစိုးလို့ အိမ်လည်တိုင်မှာ သမီးပျို စိတ်ဝေတနာသည်လေးကို သံကြိုးခတ်ထားခဲ့တယ်တဲ့လား…
ဘယ်အပေါက်ကတက်တက် တက်လို့ရနေတဲ့ အဖွားအိမ်…အိမ်တံခါးမရှိ ခြံတကား ဗလာနဲ့ အဖွားအိမ်က သံကြိုးခတ်ခံထားရတဲ့ သမီးလေးအတွက် လုံခြုံနေလို့လားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်….
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မမေးဖြစ်ပါဘူး…
ဘာလို့ဆို မေအေတခု သမီးတခုဘဝမှာ မဖြစ်မနေ ထမင်းစားဖို့ ထွက်ရှာရမယ့်အဖွားက စိတ်ဝေဒနာသည် သူ့သမီးလေးကို စိတ်မချလွန်းလို့ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး သံကြိုးလေးခတ်ထားရင် သူ့သမီးလေး လုံခြုံပြီလို့ ကိုယ့်စိတ်ကို လှည့်စားရင်း ငွေထွက်ရှာရတယ် ထင်ပါရဲ့….
ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ အဖွားအကြောင်းကို ဆက်မေးဖြစ်ပါတယ်…..
” ကျွန်မတို့က မိသားစု ၅ ယောက်ရှိပါတယ်…သမီးလေးက အလတ်၊ သူ့အထက်မှာ အမတစ်ယောက်နဲ့ သူ့အောက်မှာ မောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်”
“အရင်တုံးက ကျွန်မတို့တွေတော်တော်လေး ​ပြည့်စုံကြတယ်…သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးနဲ့…ဟိုး မှာမြင်နေရတဲ့ လယ်တွေ တွေ့လား…
အဲ့ကနေ ဟိုးသစ်တော အုပ်လေးထိ အရင်က ကျွန်မတို့လယ်တွေ အဆင်မပြေလို့ ရောင်းလိုက်တာ” ဆိုပြီး အိမ်ရှေ့လမ်းလေးရဲ့ တဖက်ကနေ ဟိုးဘုရားဖြူဖြူလေးနဲ့ တောအုပ်စပ်အထိ မျက်စိတဆုံး စိမ်းညှို့နေတဲ့ လယ်တွေကို ခပ်ဆွေးဆွေးလေးကြည့်ပြီး လက်ညှိုးထိုးပြရှာတယ်…..
” သမီးလေး ၁၈ နှစ်လောက်မှာ၊ သမီးအကြီးလေးက မိန်းကလေးရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်…သူတို့ ညီအမတွေက သိပ်ချစ်ကြတာလေ…အဲ့ထဲက သမီးက စကားသိပ်မပြောတော့ဘူး…ဒါပေမဲ့ အလုပ်တော့ လုပ်တယ်…ဘုရားရှိခိုးတယ်.”
“သားအငယ်ကတော့ ဆိုးတယ်…သူက အရက်သောက်တယ် လောင်းကစားလုပ်တယ်….အိမ်က ပစ္စည်းတွေ အကုန်ခိုးရောင်းတာ…အဲ့တော့ သူ့အဖေနဲ့ အမြဲ ပြသနာတက်ကြတယ်…”
“အဲ့နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း စီးပွားလဲကျလာ အိမ်မှာလဲ ခဏခဏ ပြသနာတက်တော့ သမီးလေး အခြေအနေက ပိုဆိုးလာတယ်…ပထမပိုင်းတော့ သီချင်းတွေအော်ဆိုတယ်…အဲ့ကနေ ဆဲတယ် စကားအကျယ်ကြီးပြောတယ်…ညဆို မအိပ်ဘဲ ငိုတယ်…”
” သူ့အဖေရှိတုံးကတော့ သူ့ကို မျိုးစုံကုတယ်….တံတားလေးလဲရောက်တယ်…ဘယ်နေရာကောင်းတယ်ဆို သွားကုတာဘဲ…သူ့အဖေက နှလုံးမကောင်းဘူး…သူ့ရောဂါတောင် သူမကုဘဲ သူ့သမီးကို ကောင်းတယ်ကြားတာနဲ့ လိုက်ကုတာ…ကုရင်းနဲ့ဘဲ သူ့သမီးမဆုံးဘဲ သူဆုံးသွားရှာတယ်…စိတ်တွေညစ်တာလဲ ပါတာပေါ့…”
” သူ့အဖေဆုံးဆော့ ကျွန်မလဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး…သားကလဲ အိမ်ပြန်လာရင်လာတယ် မလာရင်မလာဘူး…လောင်းကစားလုပ်ပြီး ရှိတာ အကုန်ရောင်းတယ်…ကျွန်မကလဲ သူ့ကိုကြောက်ရတယ်…”
“သိပ်မကြာဘူး သားက မိန်းမရတယ်…မိန်းမလဲရရော သူလိမ်မာပါမယ်…ရန်ကုန်တက်အလုပ်လုပ်မယ် လယ်တွေ ရောင်းပေးပါ…ဟိုမှာ အခြေချမယ်…သူပြန်လာခေါ်မယ်ပြောတယ်…ကျွန်မလဲ သားအမိနှစ်ယောက်ထဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့…
သူ့ကို လယ်တွေအကုန်အပ်လိုက်တာ….ရောင်းပြီး တစ်လ နှစ်လတော့ အဆက်အသွယ်လုပ်သေးတယ်…နောက်ပိုင်း ဖုန်းလဲမဆက်တေည့ဘူး…ဖုန်းလဲ မကိုင်တော့ဘူး….
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မတို့ရှိတာတွေအကုန် ဖဲ့ရောင်း ထုတ်ရောင်းရင်း နောက်ဆုံး ဒီလို ဘဝရောက်တာပါဘဲ…သားကိုလေ အရမ်းစိတ်နာတယ်…ကျွန်မတို့ ဒီဘဝရောက်အောင် သူလုပ်တာ….အီးဟီးဟီး..” ဆို ခြုံးပွဲချငိုနေရှာတယ်..
” ကျွန်မလေ ပဲနှုတ်ချိန် ပဲနှုတ် ကောက်စိုက်ခ်ျန် ကောက်စိုက်၊ ဘာအလုပ်မှ မရှိရင် လယ်တွေထဲ ကနဖော့ နှုတ်တယ်၊ ကန်စွန်းရွက်ခူးတယ်…မြို့တက်ရောင်းတယ်…ကျွန်မ အပြင်သွားနေချိန်တော့ သမီးလေးခြေထောက်ကို သံကြိုးနဲ့ ချည်ထားခဲ့ရတာ….တခါလျှောက်ထွက်တာ ပြန်ပို့လို့တော်သေးတာ…အဲ့ထဲက ကျွန်မ အမြဲခတ်ထားတာ…”
ပုံ့လဲ အဖွားကို ဆေးကျ ဘယ်လိုကုလဲ မေးတော့…
“ကျွန်မ ပိုက်ဆံရှိရင် တပတ်တခါ ဟင်္သာတက် ဆေးထုတ်တယ်…မရှိရင်တော့ ဆေးမတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့…ဆေးတိုက်ရင်တော့ ငြိမ်တယ်…မတိုက်ရင်ကျွန်မ သူ့အနားမအိပ်ရဲဘူး…စိတ်ထလာရင် အကုန်ပေါက်ခွဲ လက်သီးတွေနဲ့ထိုး သောင်းကျန်းတာ…
တခါ ကျွန်မတောင် ထိုးမယ်လုပ်လို့ ဘေးက ဝိုင်းဆွဲရတယ်…အဲ့ထဲက ကျွန်မ သူနဲ့အတူမအိပ်ရဲတော့ဘူး…ကျွန်မ ဒီမှာ ထွက်အိပ်တာ….သူဘယ်လောက်ကြမ်းလဲ ဘုရားစင်ကိုကြည့်လေ…ဘုရားရော အိုးတွေရော ပေါက်ခွဲပစ်တာ…ဘုရားတောင် တခြမ်းပဲ့နေပြီ…”
အဖွအိပ်တဲ့နေရာကြည့်တော့ အိမ်ရှေ့ကွတ်ပစ် အကာမပါ…အခင်းကျဲကျဲပေါ်မယ် ပီနံအိတ်လေးခင်းလို့…ဘုရားစင် မော့ကြည့်တော့လဲ ဘုရားတခြမ်းပဲ့လေးနဲ့….သူမကဘဲ ဆက်ပြောပါတယ်…
” ကျွန်မအခု အရင်လို အလုပ်သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး…အရင်ဆို မြို့ကို စက်ဘီးစီးရင် မမောဘူး…ခုမောတယ်…ပြီးတော့ ကျွန်မ သူ့ကို ဆက်မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ဘူး…ကျွန်မပါ ရူးရင်ရူး မရူးရင် သတ်သေမိလိမ့်မယ်…
ကျွန်မ ထမင်းလဲ နပ်မှန်အောင် မရှာနိုင်တော့ဘူး…ကျွန်မ သမီးလေးကိုလဲ ဆေးမတိုက်နိုင်တော့ဘူး ဆရာမရယ်….အီး ဟီး….ကျွန်မရော ကျွန်မသမီးလေးရော အတူတူသေဖို့ ကျွန်မ ခဏခဏကြံမိတယ် ဆရာမရယ်”
ဟုတ်ပါတယ်…ပုံ့လဲ သူ့နေရာ ခဏ ဝင်ခံစားကြည့်တာ ထွက်ပေါက်အရမ်းကို ပိတ်သွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်…ချက်ချင်းရူးချင်သွားတယ်…
ကျွန်မလဲ ဘာမှ မတွေးတော့ဘဲ ကျွန်မ လက်ခံပါ့မယ်ဆိုပြီး သူတို့ သားအမိကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ယူမိတယ်…ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေး အဲ့လောက်ဆိုးရင် လက်မခံပါဘူး…ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ ကျွန်မ နှလုံးသားက ကျွန်မကို ငြင်းခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး….
ကျွန်မက အဖွားကို သမီးလေးရော၊ အဖွားကိုပါ နှစ်ယောက်စလုံးကို စောင့်ရှောက်ပေးပါ့မယ် ဆိုတော့ တအပျော်သွားရှာတယ်…သူပျော်လို့ ပြောတဲ့ စကားလုံးမှာ ကျွန်မကတော့ အဖြေတစ်ခု ရသွားခဲ့တယ်….
” ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆရာမရယ်…ကျွန်မလေ ကျွန်မပါ လိုက်ချင်တာ…နှစ်ယောက်ဆို လက်မခံနိုင်မှာ စိုးလို့ ကျွန်မ သမီးလေးကိုဘဲ အပ်ရတာပါ….ကျွန်မ သမီးလေး မရှိရင် ကျွန်မလဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး…
ရူးချင်ရူး သေချင်သေမှာ…ပြီးတော့ ကလေးက စိတ်ထရင် ကျွန်မနဲ့မှ ဖြစ်တာ…အရင် ပိုက်ဆံအဆင်ပြေတုံးက ညဘက် မအိပ်ဘဲ စိတ်ထရင် ကျွန်မ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ စိတ်ဆေးတွေ ၃/၄ လုံးတိုက်ပစ်တာ အဲ့ဒါဆို သူက ငြိမ်ပြီး အိပ်ရော”
“ဟင်…အဖွားကို ဆရာဝန်က တိုက်ခိုင်းတာလား” လို့ ပုံ့က အလန့်တကြားမေးတော့….
” မဟုတ်ဘူး…ကျွန်မဟာ ကျွန်မတိုက်တာ…ဆေးတွေက တပါတ်မပြည့်ခင်ကုန်ရော…ခုတော့ ပိုက်ဆံမရှိတော့ ဝယ်လဲ မတိုနိုင်တော့ပါဘူး…အဲ့တော့ သူလဲ ပိုဆိုးလာတယ်…”
ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေလဲ ပြန်ပြင်မရပြီမို့ စေတနာစောနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာမတတ်ရှာ၊ ဗဟုသုတမကြွယ်ရှာဘဲ သားသမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်လေး တခုနဲ့ အကောင်းဆုံးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့ ယူဆနေတဲ့ ဒီမအေကြီးကို အပြစ်မဆိုချင်တော့လို့ ဘာမှ မပြောဖြစ်တော့ပါဘူး…
ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ပြောပါတယ်…သူ့သမီးက အဲ့ဒါကြောင့် ပိုဆိုးတာတဲ့ စဖြစ်တုံးက သူ့သမီးလေး မအိပ်ရင် ဆေးတွေ လှိမ့်တိုက်တာတဲ့…အင်း လို့ တလုံးထဲဘဲ ပြောမိတော့တယ်…
နောက်ဆုံး ပုံ့လက်ခံတော့ သူတို့သားအမိ ရိပ်သာလာမယ်ပေါ့…သူ့သမီးလေးတော့ အရင်ပို့မယ်…သူကတော့ ခုတခါ ဘဏ်ငွေထုတ်ရင် သူရစရာရှိတဲ့လူဆီက ရစရာတောင်းပြီး သူ့ကြွေးလေးတွေ ဆပ်ပြီးမှ လာခဲ့ပါရစေတဲ့…သံသရာကြွေး မပါချင် လို့ပါတဲ့…
ပုံ့လဲ ကူမယ့်ကူ အဆုံးထိဘဲ ကူလိုက်ပါတော့တယ်…ပေးရမယ့် အကြွေးစာရင်းတွက်ခိုင်း ပုံ့ဘဲ စိုက်ဆပ်ပြီး တခါထဲဘဲ လိုက်ခဲ့ဖို့ဘဲ မှာပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်…
မပြန်ခင် အဖွားက သူ့သမီးလေး နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့ ပါလာတဲ့ မုန့်တွေ သူ့ကို ကျွေးရင်း စကားပြောကြတယ်…အသက်က ၃၈ ဆိုတော့ ပုံ့ထက်ကြီးတယ်…ဒါပေမဲ့ ကလေူလေးလိုဘဲ…မုန့်ကျွေးတော့ မအေစားဆိုမှ သူစားတယ်…
ပုံ့ကို အဖွားက သူတို့ဘဝအကြောင်း ပြောပြနေချိန် သူ့အတိတ်ကို ပြန်သတိရတော့ အမူအရာ ပျက်လာတာနဲ့ သံကြိုးပြန်ခတ်ထားရတယ်…သံကြိုးဖြည်ပြီး ပုံ့နဲ့ စကားပြော ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်တုံးက ပြုံးရွှင်နေသလောက် သံကြိုးပြန်ခတ်တော့ ရုပ်က အတော်ကို တင်းမာနေတယ်….
မိသားစုအရေးတွေကို ရူးလောက်တဲ့ထိ ကြိတ်ခံခဲ့ရပုံပေါ်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဆပ်စရာရှိတာတွေဆပ်၊ လုပ်စရာရှိတာတွေ အပြီးလုပ်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် တပြိုင်ထဲလ်ာက်ခဲ့ဖို့ မှာရင်း ပုံ့တို့တွေ ပြန်လာခဲ့ကြတယ်…အပြန်ခရီးမှာတော့ ကားပေါ်က လူတွေ အားလုံး အတွေးကိုယ်စီနဲ့ တိတ်ဆိတ်လို့ပေါ့…….
၃ ရက်လောက်နေတော့ မနက်အစောကြိး သူတို့သားအမိ သုံးဘီလေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ်…နောက်မှာလဲ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလိုက်ပို့ရှာတယ်….
သမီးလေးကို ဟင်္သာတကို ဘုရားဖူးသွားမယ်ဆိုပြီး ညာခေါ်လာခဲ့တာ…သူတို့တွေ ရိပ်သာရောက်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုရားကို အရင်ပြရတယ်…ဘုရားဖူးပေါ့….
ပုံ့လဲ အမအခြေအနေက ဆိုးတာနဲ့ အဖွားတွေနဲ့ တွဲထားဖို့ မဖြစ်တော့ နောက်ဘေးမှာ အလှုရှင်တွေ အသစ်လှုဒါန်းထားတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး အဆောင်လေးမှာ သီးသန့်ထားလိုက်တယ်…
အစက နှစ်ယောက်တခန်းထားဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့…အဖွားက သူ့သမီးက စိတ်ဖောက်လာရင် သူ့ကို ရိုက်တယ် လည်ပင်းညှစ်တယ် မနေရဲဘူးဆိုလို့ ဘေးချင်းကပ်လျက် အခန်းလေးမှာ ထားပေးရတယ်….
အမနေတဲ့ အခန်းကို သော့လေးခတ်ထားပြီးအဖွားကို သော့လေးအပ်ထားလိုက်တယ်…အဖွားက သန်မာသေးတာဘဲ တခြားဘာလုပ်စရာမလိုဘူး…ကိုယ့်သမီးတာဝန်လေးတော့ ကိုယ်ယူပေးနော်…
အဖွားသမီးကိုဘဲ ဂရုစိုက်ပေးပါဆိုတော့…အဖွားလဲ အားရဝမ်းသာနဲ့…ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်မကလဲ အဲ့လ်ုသမီးလေးကို ပြုစုချင်တာပါတဲ့….
ခုတော့ ခိုလှုံရာရဲ့ အရိပ်မှာ အမလဲ ခြေထောက်ကို ၁၄ နှစ်ကြာ သံကြိုးခတ်ပြီး ချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ ဘဝက လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီ….ဘဝကို အရှုံးပေးဖို့ထိ ကြံရွယ်နေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်ဆိုးမရှည်ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ အဖွားလဲ ၀လို့ လှလို့ ကျန်ရှိတဲ့ဘဝကို လောကကြီးမှာ နေပျော်နေခဲ့ပြီ…
စိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆို အမက သီချင်းတွေဆိုတယ်၊ ကတယ်၊ ဆော့တယ်၊ ပဌာန်းရွတ်တယ်…ရုပ်လေးကလဲ ချောချောလေးနဲ့ ကလေးလေးလိုပါဘဲ…အဲ့ချိန်ဆို သူ့အမေက သူ့သမီးလေး အခန်းကို ဖွင့်ပေးပြီး သားအမိနှစ်ယောက် အဖွားဆောင်မှာ TV ကြည့်ကြတယ်….
ဟော…ဆေးမှန်မှန်တိုက်တဲ့ကြားကဘဲ စိတ်ဖောက်တဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ အော်ဟစ်ပြီး တဒုံးဒုံးနဲ့ အော်ဟစ် လက်သီးတွေနဲ့ထိုးလို့ အခန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ကာထားတဲ့ ကျောက်ပြားအထူတွေပါ ထိုးပါများတော့ ပေါက်ပြဲကုန်ပါလေရဲ့…
တံခါးဆိုရင်လဲလေ သူ့မေမေ ယူလာတဲ့ သူ့သမီးလေး ခြေထောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ သံကြိုးနဲ့ ချည်ထားရတယ်…အမက ဖောက်ရင် အကုန်ရိုက်ဖွင့်တာရယ်….
ပုံ့တို့ရဲ့ ခိုလှုံရာလေးကတော့ ဘယ်လိုလူလာလာ လာသမျှလူရဲ့ ကောင်းဒဏ် ဆိုးဒဏ်ကိုခံရင်း ထုသားပေသားကြနေပါပြီ…ပုံ့လေ ပုံ့ဆီကို ရောက်လာတဲ့သူတွေ ဆိုးလို့ဆိုပြီး နောင်ဒီလိုလူ လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး…
ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး စိတ်မကျန်းမာလို့ ဆိုးမိတဲ့အမှား ပုံ့အမြဲခွင့်လွှတ်တယ်…တချက် မငြိုငြင်ခဲ့ဖူးဘူး…တချက်အပြစ်မပြောခဲ့ဖူးဘူး…ဆိုးတဲ့လူကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ရမလဲဘဲတွေးတယ်…
အခုလဲ အမ ထိုးခွဲခဲ့လို့ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ကျောက်ပြားတွေနေရာမှာ အုတ်နံရံတွေ ကာပစ်လိုက်တယ်…ဒီလို ထိုးခွဲလို့ အခန်းတွေပျက်ဆီးလို့ ပြန်ပြင်ရတာ အမနဲ့ဆို နှစ်ယောက်ရှိပါပြီ….
ဒါပေမဲ့ တကယ်ကို ခိုကိုးရာမဲ့ပြီး မကယ်ရင် အန္တရာယ်ဖြစ်တော့မယ့် လူဆို ပုံ့ကယ်မိနေအုံးမှာပါဘဲ…
တစ်ဦးစေတနာ တစ်ဦးမေတ္တာလို့ဘဲ ပြောရမလား…
အမ ဘယ်လောက်သောင်းကျန်းကျန်း ပုံ့သွားရပ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းငြိမ်သွားတတ်တယ်…ပုံ့ မေတ္တာကို သူခံစားမိမယ်ဆိုတာ ပုံ့ယုံတယ်…အဖွားကလဲ သူနိုင်သလောက် ရိပ်သာကိစ္စတွေ ကူလုပ်ပေးရှာတယ်…
ခုတော့လဲ အမတို့ သားအမိတွေ ဝဋ်ကြွေးတွေ ကုန်ပြီး ခိုလှုံရာ အရိပ်မှာ အေးချမ်းနေတာ တနှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ…အဖွားရော ၊ အမရော ဝလို့ လှလို့ စိုလို့ပေါ့…
အဖွားလဲ သူသေရင်တောင် သမီးလေးကို ခိုလှုံရာမှာ စိတ်ချပြီဆိုပြီး နေမဝင်မှီ ဆည်းဆာချိန်လေးကို အလှပဆုံး အအေးချမ်းဆုံး ဖြတ်သန်းနေပါပြီရှင်…..။ ။
ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့ပုံလေးနဲ့ အခုရိုက်ထားတဲ့ ဘောလုံးလေးနဲ့ပုံကို ယှဉ်ကြည့်ရင် သူတို့ရဲ့ လက်ရှိဘဝ ငြိမ်းချမ်းမှုလေးကို အထင်းသား မြင်နေရမှာပါ…
(ဝဋ်ကြွေးတွေ ပါလာခဲ့ရင် အပြစ်မရှိဘဲလဲ အချုပ်အနှောင်ခံရတတ်တယ်ဆိုတာလေး သံဝေဂယူမိပါတယ်…
မျက်နှာ ပုံတွေတော့ မဖျက်တော့ပါဘူး….အဖွားကိုယ်တိုင်က သူ့သားသိစေချင်လိုပါတဲ့…သူ့သား နံမည်ကြီးတောင် ထည့်ပြီး တင်ခိုင်းတာမို့ပါ…ပုံ့ကတော့ နံမည်မတင်တော့ပါဘူး…
ဒါပေမဲ့ အကုန်ရောင်းပြီး ထားသားရက်တဲ့ သားဖြစ်သူကြီး ဒီစာလေးကို ဖတ်မိတဲ့အခါ လိပ်ပြာလုံပါစေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် )
Thinn Shwe Sin Hlaing
နှဈအကွာကွီးထိ သံကွိုးခတျလို့ ခြုပျနှောငျခံခဲ့ ရတဲ့ သူမတို့အကွောငျးေ လး ပုံ့ပွောပွမယျ….
လူရယျ လို့ဖွဈလာပွီမို့ လောကဒဏျရဲ့ ရိုကျနှကျမှုကို ခံရတာ သိပျတော့ မဆနျးလှပါဘူး…ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီ့ လောကဒဏျ ဆိုတာကွီးက သူတို့ သား အမိကိုမှ ခဏခဏ လှဲ လှဲ ရိုကျနတောကတော့ အရမျးကို ရငျနာစရာ ကောငျးလှပါတယျ…..
သူတို့သား အမိ ပုံ့ဆီရောကျလာပုံလေးက ထူးဆနျးတယျ…ပုံ့ ဖှငျ့ထားတာ ဘိုးဘှားရိပျသာဆိုတော့ ပုံမှနျဆို သားသမီးတှကေ ပဈသှားတဲ့ မိအိုဘအိုတှဘေဲ ရောကျလာတတျကွတယျ…
သူတို့ ကတော့ ထူးထူးခွားခွား မအကေိုယျတိုငျက သူ့သမီးလေးကို ရိပျသာအပျပါရစဆေိုပွီး ခှငျ့လာတောငျးခဲ့တာ….
သူတို့ သားအမိ ပုံ့ဆီရောကျလာခဲ့တာ ခုဆောငျးတှငျးဆို တနှဈပွညျ့ခဲ့ပွီ…သူတို့ရဲ့ ဇာတျလမျးလေးဟာ ရငျနာစရာကောငျးလှနျးလို့ ရေးဖို့တောငျ စကားလုံးတှေ ရှာမရခဲ့ဘူး…
ဒါပမေဲ့ လောကကို လှယျလှယျအရှုံးပေးတတျကွသူတှကေို တှတေို့ငျး ဒီသားအမိအကွောငျးလေးကို ရေးပွခငျြခဲ့မိပါတယျ….
မနှဈကဆောငျးရာသီရဲ့ နှငျးတှကေနြတေဲ့ နတေ့နမှေ့ာပေါ့…ပိနျခြုံးပွီး မကျြကှငျးတှတေောငျ ကနြပွေီဖွဈတဲ့ အဖှားတဈယောကျ စကျဘီးအစုတျလေးကို စီးပွီး ပုံ့ဆီရောကျလာခဲ့တယျ….
ပုံ့အတှကျတော့ အဲ့ဒီနသေ့ညျလဲ အရငျနတှေ့လေိုပါဘဲ…ကလေးတှနေဲ့ ဆော့ရငျး ရိပျသာရှကေ့ ခုံလေးမှာ ထိုငျနခေဲ့တယျ…အဲ့ဒီအခြိနျ အဖှားရောကျလာပွီး ပုံ့ကို မေးရှာတယျ…
” သမီး ခိုလှုံရာဆိုတာ ဒါလားဟငျ ” ပုံ့လဲ ” ဟုတျပါတယျ အဖှား…ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ လာ ထိုငျပါ ” ဆိုတော့…
အဖှားက ပုံ့ဘေးက ထိုငျခုံလေးမှာ ဝငျထိုငျရငျး ဘာမပွောညာမပွောနဲ့ ခြုံးပှဲခငြိုပါတော့တယျ…ပုံ့လဲ ရိပျသာက ဝနျထမျးတှနေဲ့ ဘာမြားဖွဈလို့ပါလိမျ့ဆိုပွီး စိတျပူသှားတယျ…
အဖှားခမြာတော့ ဒီစကားလုံးတှကေို ပွောထှကျဖို့အတှကျ ရငျထဲမှာ အရမျးကိုတဈဆို့ နပေုံပျေါပါတယျ…ပုံ့မေးတာ မဖွနေိုငျသေးဘဲ သူငိုလို့ ဝတော့မှ…
” အဖှားသမီးလေးကို ဒီရိပျသာမှာ ထားခငျြလို့ပါ သမီးရယျ ” တဲ့…ပွောပွီးတာနဲ့ ခြုံးပှဲခငြိုပွနျပါတယျ…သားသမီးကို ပဈရတဲ့ပှဲဆိုတော့လဲ မငိုဘဲ ဘယျနနေိုငျပါ့မလဲလေ…
ပုံ့လဲ “ဟငျ” လို့ တလုံးတညျးသာ ပွောပွီး အတျောအံ့သွသှားမိတယျ…ဟုတျတယျလေ ပုံ့ ဖှငျ့ထားတာ ဘိုးဘှားရိပျသာဆိုတော့ ပုံ့ဆီရောကျလာတာတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ သားသမီးက ပဈတဲ့ မိအိုဘအိုတှေ…
အခုကြ မိခငျကိုယျတိုငျက သူ့သမီးလေးကို လာအပျရှာတာဆိုတော့ မအံ့သွခံနိုငျပါ့မလား…ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ…
” အဖှား…အဖှားသမီးလေးက ဘာဖွဈလို့လဲ…ဘာလို့အပျခငျြတာလဲ ” ဆိုတော့ အဖှားက…
” ကြှနျမ သမီးလေးက စိတျကနျြးမာ ရေး မကောငျးရှာတဲ့သူပါရှငျ… အသကျက အခုဆို ၃၈ နှဈရှိပါပွီ…အသကျ ၁၈ နှဈလောကျထဲက ဒီရောဂါဖွဈခဲ့တာပါ…”
” သူ့အဖလေဲ သူ့ရောဂါကို ကုရငျးနဲ့ဘဲ ဆုံးသှားတာ ၁၀ နှဈလောကျရှိပါပွီ…သူ့အဖမေရှိထဲက ကြှနျမဘဲ ရှာဖှကြှေေးမှေးခဲ့ရတာပါ ”
” အခု သမီးလေးရောဂါက ပိုဆိုးလာလို့ ကြှနျမ သူနဲ့လဲ မနရေဲတော့လို့ပါ…ပွီးတော့ ကြှနျမလဲ အသကျကွီးလာတော့ ကနျြးမာရေးမကောငျးတော့လို့ သူ့ကိုလဲ ဝအောငျ ရှာမကြှေးတော့သလို၊
ကြှနျမသသှေားရငျလဲ သမီးလေးကို တဈယောကျထဲ စိတျမခလြို့ လာအပျရတာပါရှငျ…ဟီး…ဟီး…ဟီး…” ဆိုပွီး ငိုပါတော့တယျ…ငိုနရေငျးနဲ့ဘဲ…
” ကြှနျမ သမီးလေးကို ကြှနျမမသခေငျ စိတျခခြဲ့ခငျြလို့ပါ…ဟီး ဟီး…ကြှနျမလဲ ကနျြးမာရေး တနတေ့ခွား ပိုပိုဆိုးလာလို့ပါ…အရငျဆို ကြှနျမ လယျထဲက ကနဖော့တှေ ကနျစှနျးရှကျတှေ ခူးပွီး စကျဘီးနဲ့ မွို့တကျရောငျးတာ…အခုတော့ စကျဘီးစီးရငျ အရမျးကိုမောလာတယျ…ကြှနျမ သမှော မကွောကျပါဘူး…ကြှနျမသမီးလေးကို စိတျမခလြို့ပါ…ဟီးဟီး…လကျခံပေးပါ ဆရာမရယျ….” ဆိုပွီး သူ့လကျထဲပါလာတဲ့ သူ့သမီးလေးဓာတျပုံပွရှာတယျ….
ပုံ့လဲ သာမာနျဆို အသကျငယျတဲ့သူ၊ အိမျယာရှိတဲ့သူ၊ စိတျကနျြးမာရေး အရမျးကို ဆိုးတဲ့သူဆို လကျမခံပါဘူး..ဒါပမေဲ့ ဒီနတေ့ော့ အဖှားကို သနားတာနဲ့ ပုံ့ကိုယျတိုငျလာကွညျ့ပါ့မယျဆိုပွီး လိပျစာတောငျးထားလိုကျတယျ…
အဖှားလဲ ထိုငျရာကနထေ ပွနျဖို့ဟနျပွငျရငျး စကျဘီးပျေါတကျတဲ့အထိ တဖှဖှ မှာရှာတယျ…
“…ဆရာမရယျ လာဖွဈအောငျလာခဲ့ပါနျော…ကြှနျမ အားကိုးပါရစနေျော…ဆရာမ လကျခံရငျလေ ကြှနျမ အိမျဝိုငျးလေးကို ရောငျးပွီ အကွှေးလေးတှပေေးပွီးတာနဲ့ ကြှနျမလဲ ကြှနျမသမီးလေးနဲ့ လာနပေါရစနေျော…ဆရာမ လာဖွဈအောငျ လာခဲ့ပါနျော….”
ပုံ့လဲ ” ဟုတျကဲ့ ဟုတျကဲ့ စိတျခပြါအဖှားရယျ…ပုံ့လာခဲ့မယျနျော..” လို့ ပွောပွီး နောကျနမှေ့ သှားမယျဆိုပွီး နလေိုကျတယျ စိတျထဲတော့ အတှေးမြားစှာနဲ့ပေါ့….
ပုံ့ တမနကျလုံး သူတို့သားအမိအကွောငျးဘဲ တှေးနမေိတယျ…သူ့သမီးလေးက ဘာလို့ ရူးတာလဲ…မိသားစု ဆှမြေိုး မရှိဘူးလား…အဖှားက ဘာလို့ သစေကား ခဏခဏပွောရတာလဲ…သူ့သမီးလေး မရှိရငျရော သူဘာဖွဈမှာလဲ စသညျဖွငျ့ပေါ့….
နလေ့ညျလောကျရောကျတော့ ပုံ့စိတျထဲ လုံးဝကိုနလေို့ မရတော့ပါဘူး…ပုံ့ ရိပျသာက အကိုကို ကားမောငျးခိုငျးပွီး အဖှားတို့သားအမိရှိတဲ့ ရှာလေးကို ထှကျခဲ့ပါတော့တယျ…
ရှာလေးက ဟင်ျသာတနဲ့ သိပျမဝေးပမေဲ့ တျောတျောလေးကို ခြောငျကပြါတယျ…ကားပျေါက တဈယောကျကဆငျးပွီး ရှကေ့လမျးရှာပေးရပါတယျ…ကားက နှားလှညျးလမျးကွီးပျေါ ခှမောငျးရတာ မိုးကုနျကာစ ရှံ့လမျးဆိုတော့ တကယျ့ကို ခကျခကျခဲခဲပါ…
မေးရငျး မေးရငျး မောငျးလာလိုကျတာ…နောကျဆုံးတော့ အိမျရှမှေ့ာ ရအေိုးစငျလေးနဲ့အိမျဟာ မဌေးတို့ သားအမိအိမျပါတဲ့…အျော သူတို့ရဲ့ဘဝတှေ ပူလောငျနပေမေယျ့ သူတပါးကိုတော့ အေးခမျြးစခေငျြတဲ့ စတေနာလေးရှိကွပါလားပေါ့…
ခွံရှကေို့ရောကျတော့ အိမျဆိုတာ ရှာမတှဘေူ့းရယျ တခွံလုံး ခွုံတှနေဲ့ဖုံးလို့…ပွီးတော့ တောရှာက အိမျဆိုတော့ ခွံဝနဲ့ အိမျက အတျောလေးလှမျးတာ…အိမျဆီကိုရောကျဖို့ အပငျတှကွေားက တိုးဝှသှေ့ားရတာရယျ…
ဟော…တှပေ့ါပွီ…ကွမျးပေါကျကြဲကြဲ အမိုးပွဲပွဲ ထရံအကှဲနဲ့ ယိုငျနှဲ့နပွေီဖွဈတဲ့ တခြိနျတုံးက ခနျ့ခနျ့ထညျထညျ ရှိခဲ့ပုံပျေါတဲ့ အိမျကွီး…
ပုံ့တို့ အိမျနားကို ရောကျတော့ အဖှားဒျေါဌေးနဲ့ အနားက ရပျဆှရေပျမြိုးတှလေဲ ဝိုငျးလာကွတယျ…လာပါပေါ့…ကြှနျမတို့ အိမျပါတဲ့…ဆရာမကို ချေါရမှာ အားတော့ နာပါတယျတဲ့…ကိစ်စမရှိပါဘူး…
သူမဖိတျချေါခငျထဲက ပုံ့က အိမျပျေါခှတကျဖို့ ခွလှေမျးပွငျနပေါပွီ….ဒါပမေဲ့ ပုံ့အိမျပျေါရောကျရောကျခငျြး မွငျလိုကျရတဲ့ မွငျကှငျးက ပုံ့ကို ပုံလကျြသားကသြှားစခေဲ့ပါတယျ…ဟုတျတယျ…ပုံ့ သူမကို မွငျမွငျခငျြး ဘာမှ မပွောနိုငျဘဲ ငေးရငျး ထိုငျခလြိုကျရတယျ….
သူမ…သူမ ဆိုတာက အသားဖွူဖွူ၊ နှာတံသှယျသှယျ၊ ရုပျခြောခြောလေးနဲ့ အဖှားဒျေါဌေးရဲ့ သမီးလေး… ခွထေောကျကိုတော့ အိမျလညျတိုငျမှာ သံ​ကွိုးကွိုးကွီးနဲ့ တှဲပွီး သော့ခတျထားလရေဲ့…
ခွထေောကျလေးတှကွေညျ့လိုကျတော့လဲ ဖွူနုလို့…ဒါပမေဲ့ ခွကေငျြးဝတျမှာ သံကွိုးပှနျးရာကွီးနဲ့…သူကို သော့ခတျထားတဲ့နရောမှာလဲ ကွမျးပေါကျတှကေ ကွဲလို့…
သံကွိုးခတျထားသူဟာ အမဖွေဈနတောမို့…ဘာလို့ သော့ခတျထားလဲလို့ အရငျမမေးဖွဈတော့ဘူး…ဘယျမိဘမှ သံကွိုးတနျးလနျးနဲ့ ကိုယျ့သားသမီးကို မမွငျခငျြတာ အသအေခြာမို့ပါ…
ဒါကွောငျ့ ဒီလို သံကွိုးခညျြထားတာ ဘယျလောကျကွာပွီလဲ လို့ မေးမိတယျ….
” သူမ အသကျ ၂၀ ကြျော ၊ သူမ အဖေ ဆုံးပွီးထဲက သမီးလေးကို ကြှနျမက ဒီလိုဘဲ သော့ခတျထားရတယျ…ခုဆို သမီး အသကျ ၃၈ ဆိုတော့၊ သံကွိုးခတျထားရတာ နှဈတျောတျောကွာပါပွီ ”
“သမီးလေး အဖမေရှိတော့ သားအမိနှဈယောကျထဲ၊ ကြှနျမက ကနဖော့ခြိုးသှားတော့ အိမျမှာ သမီးကို စောငျ့မယျ့လူမရှိတာနဲ့ ထှကျသှားမှာစိုးလို့ သံကွိုးခညျြ ထားခဲ့ရတာပါ”
“ဘေးက ကွမျးပေါကျတှကေ ကြှနျမဖောကျပေးထားတာ၊ အပေါ့အလေး သှားလို့ရအောငျပါ”
ကြှနျမ ဘာမပွောနိုငျဘဲ ငိုငျနမေိတယျ…အျော…အဖှားရယျ…ထှကျသှားမှာစိုးလို့ အိမျလညျတိုငျမှာ သမီးပြို စိတျဝတေနာသညျလေးကို သံကွိုးခတျထားခဲ့တယျတဲ့လား…
ဘယျအပေါကျကတကျတကျ တကျလို့ရနတေဲ့ အဖှားအိမျ…အိမျတံခါးမရှိ ခွံတကား ဗလာနဲ့ အဖှားအိမျက သံကွိုးခတျခံထားရတဲ့ သမီးလေးအတှကျ လုံခွုံနလေို့လားလို့ မေးလိုကျခငျြပါတယျ….
ဒါပမေဲ့ ကြှနျမ မမေးဖွဈပါဘူး…
ဘာလို့ဆို မအေတေခု သမီးတခုဘဝမှာ မဖွဈမနေ ထမငျးစားဖို့ ထှကျရှာရမယျ့အဖှားက စိတျဝဒေနာသညျ သူ့သမီးလေးကို စိတျမခလြှနျးလို့ ကွံရာမရတဲ့အဆုံး သံကွိုးလေးခတျထားရငျ သူ့သမီးလေး လုံခွုံပွီလို့ ကိုယျ့စိတျကို လှညျ့စားရငျး ငှထှေကျရှာရတယျ ထငျပါရဲ့….
ဒါနဲ့ ပုံ့လဲ အဖှားအကွောငျးကို ဆကျမေးဖွဈပါတယျ…..
” ကြှနျမတို့က မိသားစု ၅ ယောကျရှိပါတယျ…သမီးလေးက အလတျ၊ သူ့အထကျမှာ အမတဈယောကျနဲ့ သူ့အောကျမှာ မောငျလေးတဈယောကျရှိပါတယျ”
“အရငျတုံးက ကြှနျမတို့တှတေျောတျောလေး ​ပွညျ့စုံကွတယျ…သှပျမိုးပဉျြထောငျအိမျကွီးနဲ့…ဟိုး မှာမွငျနရေတဲ့ လယျတှေ တှလေ့ား…
အဲ့ကနေ ဟိုးသဈတော အုပျလေးထိ အရငျက ကြှနျမတို့လယျတှေ အဆငျမပွလေို့ ရောငျးလိုကျတာ” ဆိုပွီး အိမျရှလေ့မျးလေးရဲ့ တဖကျကနေ ဟိုးဘုရားဖွူဖွူလေးနဲ့ တောအုပျစပျအထိ မကျြစိတဆုံး စိမျးညှို့နတေဲ့ လယျတှကေို ခပျဆှေးဆှေးလေးကွညျ့ပွီး လကျညှိုးထိုးပွရှာတယျ…..
” သမီးလေး ၁၈ နှဈလောကျမှာ၊ သမီးအကွီးလေးက မိနျးကလေးရောဂါနဲ့ ဆုံးသှားရှာတယျ…သူတို့ ညီအမတှကေ သိပျခဈြကွတာလေ…အဲ့ထဲက သမီးက စကားသိပျမပွောတော့ဘူး…ဒါပမေဲ့ အလုပျတော့ လုပျတယျ…ဘုရားရှိခိုးတယျ.”
“သားအငယျကတော့ ဆိုးတယျ…သူက အရကျသောကျတယျ လောငျးကစားလုပျတယျ….အိမျက ပစ်စညျးတှေ အကုနျခိုးရောငျးတာ…အဲ့တော့ သူ့အဖနေဲ့ အမွဲ ပွသနာတကျကွတယျ…”
“အဲ့နောကျပိုငျး တဖွညျးဖွညျး စီးပှားလဲကလြာ အိမျမှာလဲ ခဏခဏ ပွသနာတကျတော့ သမီးလေး အခွအေနကေ ပိုဆိုးလာတယျ…ပထမပိုငျးတော့ သီခငျြးတှအေျောဆိုတယျ…အဲ့ကနေ ဆဲတယျ စကားအကယျြကွီးပွောတယျ…ညဆို မအိပျဘဲ ငိုတယျ…”
” သူ့အဖရှေိတုံးကတော့ သူ့ကို မြိုးစုံကုတယျ….တံတားလေးလဲရောကျတယျ…ဘယျနရောကောငျးတယျဆို သှားကုတာဘဲ…သူ့အဖကေ နှလုံးမကောငျးဘူး…သူ့ရောဂါတောငျ သူမကုဘဲ သူ့သမီးကို ကောငျးတယျကွားတာနဲ့ လိုကျကုတာ…ကုရငျးနဲ့ဘဲ သူ့သမီးမဆုံးဘဲ သူဆုံးသှားရှာတယျ…စိတျတှညေဈတာလဲ ပါတာပေါ့…”
” သူ့အဖဆေုံးဆော့ ကြှနျမလဲ ဘာလုပျရမှနျးမသိဘူး…သားကလဲ အိမျပွနျလာရငျလာတယျ မလာရငျမလာဘူး…လောငျးကစားလုပျပွီး ရှိတာ အကုနျရောငျးတယျ…ကြှနျမကလဲ သူ့ကိုကွောကျရတယျ…”
“သိပျမကွာဘူး သားက မိနျးမရတယျ…မိနျးမလဲရရော သူလိမျမာပါမယျ…ရနျကုနျတကျအလုပျလုပျမယျ လယျတှေ ရောငျးပေးပါ…ဟိုမှာ အခွခေမြယျ…သူပွနျလာချေါမယျပွောတယျ…ကြှနျမလဲ သားအမိနှဈယောကျထဲ ဘာလုပျရမှနျးမသိတာနဲ့…
သူ့ကို လယျတှအေကုနျအပျလိုကျတာ….ရောငျးပွီး တဈလ နှဈလတော့ အဆကျအသှယျလုပျသေးတယျ…နောကျပိုငျး ဖုနျးလဲမဆကျတညေ့ဘူး…ဖုနျးလဲ မကိုငျတော့ဘူး….
ဒီလိုနဲ့ ကြှနျမတို့ရှိတာတှအေကုနျ ဖဲ့ရောငျး ထုတျရောငျးရငျး နောကျဆုံး ဒီလို ဘဝရောကျတာပါဘဲ…သားကိုလေ အရမျးစိတျနာတယျ…ကြှနျမတို့ ဒီဘဝရောကျအောငျ သူလုပျတာ….အီးဟီးဟီး..” ဆို ခွုံးပှဲခငြိုနရှောတယျ..
” ကြှနျမလေ ပဲနှုတျခြိနျ ပဲနှုတျ ကောကျစိုကျချြနျ ကောကျစိုကျ၊ ဘာအလုပျမှ မရှိရငျ လယျတှထေဲ ကနဖော့ နှုတျတယျ၊ ကနျစှနျးရှကျခူးတယျ…မွို့တကျရောငျးတယျ…ကြှနျမ အပွငျသှားနခြေိနျတော့ သမီးလေးခွထေောကျကို သံကွိုးနဲ့ ခညျြထားခဲ့ရတာ….တခါလြှောကျထှကျတာ ပွနျပို့လို့တျောသေးတာ…အဲ့ထဲက ကြှနျမ အမွဲခတျထားတာ…”
ပုံ့လဲ အဖှားကို ဆေးကြ ဘယျလိုကုလဲ မေးတော့…
“ကြှနျမ ပိုကျဆံရှိရငျ တပတျတခါ ဟင်ျသာတကျ ဆေးထုတျတယျ…မရှိရငျတော့ ဆေးမတိုကျနိုငျဘူးပေါ့…ဆေးတိုကျရငျတော့ ငွိမျတယျ…မတိုကျရငျကြှနျမ သူ့အနားမအိပျရဲဘူး…စိတျထလာရငျ အကုနျပေါကျခှဲ လကျသီးတှနေဲ့ထိုး သောငျးကနျြးတာ…
တခါ ကြှနျမတောငျ ထိုးမယျလုပျလို့ ဘေးက ဝိုငျးဆှဲရတယျ…အဲ့ထဲက ကြှနျမ သူနဲ့အတူမအိပျရဲတော့ဘူး…ကြှနျမ ဒီမှာ ထှကျအိပျတာ….သူဘယျလောကျကွမျးလဲ ဘုရားစငျကိုကွညျ့လေ…ဘုရားရော အိုးတှရေော ပေါကျခှဲပဈတာ…ဘုရားတောငျ တခွမျးပဲ့နပွေီ…”
အဖှအိပျတဲ့နရောကွညျ့တော့ အိမျရှကှေ့တျပဈ အကာမပါ…အခငျးကြဲကြဲပျေါမယျ ပီနံအိတျလေးခငျးလို့…ဘုရားစငျ မော့ကွညျ့တော့လဲ ဘုရားတခွမျးပဲ့လေးနဲ့….သူမကဘဲ ဆကျပွောပါတယျ…
” ကြှနျမအခု အရငျလို အလုပျသိပျမလုပျနိုငျတော့ဘူး…အရငျဆို မွို့ကို စကျဘီးစီးရငျ မမောဘူး…ခုမောတယျ…ပွီးတော့ ကြှနျမ သူ့ကို ဆကျမစောငျ့ရှောကျနိုငျတော့ဘူး…ကြှနျမပါ ရူးရငျရူး မရူးရငျ သတျသမေိလိမျ့မယျ…
ကြှနျမ ထမငျးလဲ နပျမှနျအောငျ မရှာနိုငျတော့ဘူး…ကြှနျမ သမီးလေးကိုလဲ ဆေးမတိုကျနိုငျတော့ဘူး ဆရာမရယျ….အီး ဟီး….ကြှနျမရော ကြှနျမသမီးလေးရော အတူတူသဖေို့ ကြှနျမ ခဏခဏကွံမိတယျ ဆရာမရယျ”
ဟုတျပါတယျ…ပုံ့လဲ သူ့နရော ခဏ ဝငျခံစားကွညျ့တာ ထှကျပေါကျအရမျးကို ပိတျသှားတယျလို့ ခံစားရတယျ…ခကျြခငျြးရူးခငျြသှားတယျ…
ကြှနျမလဲ ဘာမှ မတှေးတော့ဘဲ ကြှနျမ လကျခံပါ့မယျဆိုပွီး သူတို့ သားအမိကို စောငျ့ရှောကျဖို့ တာဝနျယူမိတယျ…ပုံမှနျဆိုရငျတော့ စိတျကနျြးမာရေး အဲ့လောကျဆိုးရငျ လကျမခံပါဘူး…ဒီလိုအခွအေနမှောတော့ ကြှနျမ နှလုံးသားက ကြှနျမကို ငွငျးခှငျ့မပွုခဲ့ပါဘူး….
ကြှနျမက အဖှားကို သမီးလေးရော၊ အဖှားကိုပါ နှဈယောကျစလုံးကို စောငျ့ရှောကျပေးပါ့မယျ ဆိုတော့ တအပြျောသှားရှာတယျ…သူပြျောလို့ ပွောတဲ့ စကားလုံးမှာ ကြှနျမကတော့ အဖွတေဈခု ရသှားခဲ့တယျ….
” ဝမျးသာလိုကျတာ ဆရာမရယျ…ကြှနျမလေ ကြှနျမပါ လိုကျခငျြတာ…နှဈယောကျဆို လကျမခံနိုငျမှာ စိုးလို့ ကြှနျမ သမီးလေးကိုဘဲ အပျရတာပါ….ကြှနျမ သမီးလေး မရှိရငျ ကြှနျမလဲ ဘာလုပျရမှနျးမသိဘူး…
ရူးခငျြရူး သခေငျြသမှော…ပွီးတော့ ကလေးက စိတျထရငျ ကြှနျမနဲ့မှ ဖွဈတာ…အရငျ ပိုကျဆံအဆငျပွတေုံးက ညဘကျ မအိပျဘဲ စိတျထရငျ ကြှနျမ ဆရာဝနျပေးတဲ့ စိတျဆေးတှေ ၃/၄ လုံးတိုကျပဈတာ အဲ့ဒါဆို သူက ငွိမျပွီး အိပျရော”
“ဟငျ…အဖှားကို ဆရာဝနျက တိုကျခိုငျးတာလား” လို့ ပုံ့က အလနျ့တကွားမေးတော့….
” မဟုတျဘူး…ကြှနျမဟာ ကြှနျမတိုကျတာ…ဆေးတှကေ တပါတျမပွညျ့ခငျကုနျရော…ခုတော့ ပိုကျဆံမရှိတော့ ဝယျလဲ မတိုနိုငျတော့ပါဘူး…အဲ့တော့ သူလဲ ပိုဆိုးလာတယျ…”
ဖွဈပွီးခဲ့တာတှလေဲ ပွနျပွငျမရပွီမို့ စတေနာစောနဲ့ လုပျခဲ့တဲ့ ပညာမတတျရှာ၊ ဗဟုသုတမကွှယျရှာဘဲ သားသမီးကို ခဈြတဲ့စိတျလေး တခုနဲ့ အကောငျးဆုံးကို ဖနျတီးပေးခဲ့တယျလို့ ယူဆနတေဲ့ ဒီမအကွေီးကို အပွဈမဆိုခငျြတော့လို့ ဘာမှ မပွောဖွဈတော့ပါဘူး…
ပတျဝနျးကငျြကတော့ ပွောပါတယျ…သူ့သမီးက အဲ့ဒါကွောငျ့ ပိုဆိုးတာတဲ့ စဖွဈတုံးက သူ့သမီးလေး မအိပျရငျ ဆေးတှေ လှိမျ့တိုကျတာတဲ့…အငျး လို့ တလုံးထဲဘဲ ပွောမိတော့တယျ…
နောကျဆုံး ပုံ့လကျခံတော့ သူတို့သားအမိ ရိပျသာလာမယျပေါ့…သူ့သမီးလေးတော့ အရငျပို့မယျ…သူကတော့ ခုတခါ ဘဏျငှထေုတျရငျ သူရစရာရှိတဲ့လူဆီက ရစရာတောငျးပွီး သူ့ကွှေးလေးတှေ ဆပျပွီးမှ လာခဲ့ပါရစတေဲ့…သံသရာကွှေး မပါခငျြ လို့ပါတဲ့…
ပုံ့လဲ ကူမယျ့ကူ အဆုံးထိဘဲ ကူလိုကျပါတော့တယျ…ပေးရမယျ့ အကွှေးစာရငျးတှကျခိုငျး ပုံ့ဘဲ စိုကျဆပျပွီး တခါထဲဘဲ လိုကျခဲ့ဖို့ဘဲ မှာပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ…
မပွနျခငျ အဖှားက သူ့သမီးလေး နဲ့ မိတျဆကျပေးတော့ ပါလာတဲ့ မုနျ့တှေ သူ့ကို ကြှေးရငျး စကားပွောကွတယျ…အသကျက ၃၈ ဆိုတော့ ပုံ့ထကျကွီးတယျ…ဒါပမေဲ့ ကလေူလေးလိုဘဲ…မုနျ့ကြှေးတော့ မအစေားဆိုမှ သူစားတယျ…
ပုံ့ကို အဖှားက သူတို့ဘဝအကွောငျး ပွောပွနခြေိနျ သူ့အတိတျကို ပွနျသတိရတော့ အမူအရာ ပကျြလာတာနဲ့ သံကွိုးပွနျခတျထားရတယျ…သံကွိုးဖွညျပွီး ပုံ့နဲ့ စကားပွော ဓာတျပုံတှေ ရိုကျတုံးက ပွုံးရှငျနသေလောကျ သံကွိုးပွနျခတျတော့ ရုပျက အတျောကို တငျးမာနတေယျ….
မိသားစုအရေးတှကေို ရူးလောကျတဲ့ထိ ကွိတျခံခဲ့ရပုံပျေါပါတယျ…
ဒီလိုနဲ့ ဆပျစရာရှိတာတှဆေပျ၊ လုပျစရာရှိတာတှေ အပွီးလုပျပွီး သားအမိနှဈယောကျ တပွိုငျထဲလျာကျခဲ့ဖို့ မှာရငျး ပုံ့တို့တှေ ပွနျလာခဲ့ကွတယျ…အပွနျခရီးမှာတော့ ကားပျေါက လူတှေ အားလုံး အတှေးကိုယျစီနဲ့ တိတျဆိတျလို့ပေါ့…….
၃ ရကျလောကျနတေော့ မနကျအစောကွိး သူတို့သားအမိ သုံးဘီလေးနဲ့ ရောကျလာခဲ့တယျ…နောကျမှာလဲ ဆိုငျကယျတှနေဲ့ ရပျကှကျလူကွီးတှလေိုကျပို့ရှာတယျ….
သမီးလေးကို ဟင်ျသာတကို ဘုရားဖူးသှားမယျဆိုပွီး ညာချေါလာခဲ့တာ…သူတို့တှေ ရိပျသာရောကျတော့ ဘုနျးကွီးကြောငျးက ဘုရားကို အရငျပွရတယျ…ဘုရားဖူးပေါ့….
ပုံ့လဲ အမအခွအေနကေ ဆိုးတာနဲ့ အဖှားတှနေဲ့ တှဲထားဖို့ မဖွဈတော့ နောကျဘေးမှာ အလှုရှငျတှေ အသဈလှုဒါနျးထားတဲ့ စိတျကနျြးမာရေး အဆောငျလေးမှာ သီးသနျ့ထားလိုကျတယျ…
အစက နှဈယောကျတခနျးထားဖို့ စီစဉျထားပမေဲ့…အဖှားက သူ့သမီးက စိတျဖောကျလာရငျ သူ့ကို ရိုကျတယျ လညျပငျးညှဈတယျ မနရေဲဘူးဆိုလို့ ဘေးခငျြးကပျလကျြ အခနျးလေးမှာ ထားပေးရတယျ….
အမနတေဲ့ အခနျးကို သော့လေးခတျထားပွီးအဖှားကို သော့လေးအပျထားလိုကျတယျ…အဖှားက သနျမာသေးတာဘဲ တခွားဘာလုပျစရာမလိုဘူး…ကိုယျ့သမီးတာဝနျလေးတော့ ကိုယျယူပေးနျော…
အဖှားသမီးကိုဘဲ ဂရုစိုကျပေးပါဆိုတော့…အဖှားလဲ အားရဝမျးသာနဲ့…ဟုတျကဲ့ပါ ကြှနျမကလဲ အဲ့လျုသမီးလေးကို ပွုစုခငျြတာပါတဲ့….
ခုတော့ ခိုလှုံရာရဲ့ အရိပျမှာ အမလဲ ခွထေောကျကို ၁၄ နှဈကွာ သံကွိုးခတျပွီး ခြုပျနှောငျခံရတဲ့ ဘဝက လှတျမွောကျခဲ့ပွီ….ဘဝကို အရှုံးပေးဖို့ထိ ကွံရှယျနပွေီး ကိုယျ့ကိုယျကို သကျဆိုးမရှညျဘူးလို့ ထငျနတေဲ့ အဖှားလဲ ဝလို့ လှလို့ ကနျြရှိတဲ့ဘဝကို လောကကွီးမှာ နပြေျောနခေဲ့ပွီ…
စိတျကောငျးနတေဲ့အခြိနျဆို အမက သီခငျြးတှဆေိုတယျ၊ ကတယျ၊ ဆော့တယျ၊ ပဌာနျးရှတျတယျ…ရုပျလေးကလဲ ခြောခြောလေးနဲ့ ကလေးလေးလိုပါဘဲ…အဲ့ခြိနျဆို သူ့အမကေ သူ့သမီးလေး အခနျးကို ဖှငျ့ပေးပွီး သားအမိနှဈယောကျ အဖှားဆောငျမှာ TV ကွညျ့ကွတယျ….
ဟော…ဆေးမှနျမှနျတိုကျတဲ့ကွားကဘဲ စိတျဖောကျတဲ့ အခြိနျဆိုရငျတော့ အျောဟဈပွီး တဒုံးဒုံးနဲ့ အျောဟဈ လကျသီးတှနေဲ့ထိုးလို့ အခနျးတဈခုနဲ့ တဈခုကွား ကာထားတဲ့ ကြောကျပွားအထူတှပေါ ထိုးပါမြားတော့ ပေါကျပွဲကုနျပါလရေဲ့…
တံခါးဆိုရငျလဲလေ သူ့မမေေ ယူလာတဲ့ သူ့သမီးလေး ခွထေောကျခတျခဲ့တဲ့ သံကွိုးနဲ့ ခညျြထားရတယျ…အမက ဖောကျရငျ အကုနျရိုကျဖှငျ့တာရယျ….
ပုံ့တို့ရဲ့ ခိုလှုံရာလေးကတော့ ဘယျလိုလူလာလာ လာသမြှလူရဲ့ ကောငျးဒဏျ ဆိုးဒဏျကိုခံရငျး ထုသားပသေားကွနပေါပွီ…ပုံ့လေ ပုံ့ဆီကို ရောကျလာတဲ့သူတှေ ဆိုးလို့ဆိုပွီး နောငျဒီလိုလူ လကျမခံဘူးဆိုတဲ့ စိတျဘယျတော့မှ မဖွဈဘူး…
ဘယျလောကျဆိုးဆိုး စိတျမကနျြးမာလို့ ဆိုးမိတဲ့အမှား ပုံ့အမွဲခှငျ့လှတျတယျ…တခကျြ မငွိုငွငျခဲ့ဖူးဘူး…တခကျြအပွဈမပွောခဲ့ဖူးဘူး…ဆိုးတဲ့လူကို အကောငျးဆုံး ဘယျလို စောငျ့ရှောကျရမလဲဘဲတှေးတယျ…
အခုလဲ အမ ထိုးခှဲခဲ့လို့ ပေါကျပွဲနတေဲ့ ကြောကျပွားတှနေရောမှာ အုတျနံရံတှေ ကာပဈလိုကျတယျ…ဒီလို ထိုးခှဲလို့ အခနျးတှပေကျြဆီးလို့ ပွနျပွငျရတာ အမနဲ့ဆို နှဈယောကျရှိပါပွီ….
ဒါပမေဲ့ တကယျကို ခိုကိုးရာမဲ့ပွီး မကယျရငျ အန်တရာယျဖွဈတော့မယျ့ လူဆို ပုံ့ကယျမိနအေုံးမှာပါဘဲ…
တဈဦးစတေနာ တဈဦးမတ်ေတာလို့ဘဲ ပွောရမလား…
အမ ဘယျလောကျသောငျးကနျြးကနျြး ပုံ့သှားရပျလိုကျတာနဲ့ ခကျြခငျြးငွိမျသှားတတျတယျ…ပုံ့ မတ်ေတာကို သူခံစားမိမယျဆိုတာ ပုံ့ယုံတယျ…အဖှားကလဲ သူနိုငျသလောကျ ရိပျသာကိစ်စတှေ ကူလုပျပေးရှာတယျ…
ခုတော့လဲ အမတို့ သားအမိတှေ ဝဋျကွှေးတှေ ကုနျပွီး ခိုလှုံရာ အရိပျမှာ အေးခမျြးနတော တနှဈရှိခဲ့ပါပွီ…အဖှားရော ၊ အမရော ဝလို့ လှလို့ စိုလို့ပေါ့…
အဖှားလဲ သူသရေငျတောငျ သမီးလေးကို ခိုလှုံရာမှာ စိတျခပြွီဆိုပွီး နမေဝငျမှီ ဆညျးဆာခြိနျလေးကို အလှပဆုံး အအေးခမျြးဆုံး ဖွတျသနျးနပေါပွီရှငျ…..။ ။
ပထမဆုံး စတှတေဲ့ပုံလေးနဲ့ အခုရိုကျထားတဲ့ ဘောလုံးလေးနဲ့ပုံကို ယှဉျကွညျ့ရငျ သူတို့ရဲ့ လကျရှိဘဝ ငွိမျးခမျြးမှုလေးကို အထငျးသား မွငျနရေမှာပါ…
(ဝဋျကွှေးတှေ ပါလာခဲ့ရငျ အပွဈမရှိဘဲလဲ အခြုပျအနှောငျခံရတတျတယျဆိုတာလေး သံဝဂေယူမိပါတယျ…
မကျြနှာ ပုံတှတေော့ မဖကျြတော့ပါဘူး….အဖှားကိုယျတိုငျက သူ့သားသိစခေငျြလိုပါတဲ့…သူ့သား နံမညျကွီးတောငျ ထညျ့ပွီး တငျခိုငျးတာမို့ပါ…ပုံ့ကတော့ နံမညျမတငျတော့ပါဘူး…
ဒါပမေဲ့ အကုနျရောငျးပွီး ထားသားရကျတဲ့ သားဖွဈသူကွီး ဒီစာလေးကို ဖတျမိတဲ့အခါ လိပျပွာလုံပါစေ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ )
Previous post ရန်ကုန် မြို့ရှိ အခြေခံ လူတန်း စား အိမ်ထောင် စု တစ်စုကို ကျပ်လေးသောင်း စီ ထပ်မံ ထောက်ပံ့ မည်
Next post ပျားအုံ ပေါ် မှာ ဘောင်း ဘီ မပါ ပဲ ထိုင်ပြပြီး မင်္ဂလာ စရိတ် ရှာခဲ့ တဲ့ အမျိုးသား